Wasiirka Cadaaladda oo ka warbixiyay hirgalinta sharciga la dagaalanka musuqa | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wasiirka Cadaaladda oo ka warbixiyay hirgalinta sharciga la dagaalanka musuqa
Wasiirka Cadaaladda oo ka warbixiyay hirgalinta sharciga la dagaalanka musuqa
.Wasiirka Caddaaladda iyo Arrimaha Garsoorka XFS Mudane Xasan Xuseen Xaaji ,ayaa manta ka warbixiyay qodobo la xiriiray sida ay lagama maarmaanka u tahay hirgalinta dowlad wanaagga iyo toosinta maamulka hey’adha xukuumaddda Federaalka ee Soomaaliya.
Wasiirka oo maanta la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in Lagu guuleystay diyaarnta sharciga la dagaalanka musuqa iyo dhismaha guddi madax bannaan oo u howlgala ilaalinta hantida umadda.
Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay im ay socdaan sameynta qorsho lagu dhameystirayo habraaca aasaasiga u ah shaqada guddiga madaxa bannaan iyo meel marinta sidii heyadaha dowaladda loogu dabaqi lahaa dhaqangalinta sharciga la dagaalanka musuqa.
Wasiirku,waxa uu ka dhawaajiyay in la dagaalanka musuqa iyo toosinta maamulka ay dani ugu jirto shacabka,wuxuuna Soo jeediyay in la taageero qorshaha dowladda ee lagu raadinaato xal waara oo loo helo musuqa iyo wax isdaba marinta .
Maqaal horeTaabid Cabdi oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka
Maqaal XigaMaxay ka wada-hadleen Qoor Qoor & xisbiyada mucaaradka dalka?